Doorashada waan codeeyaa/u ordaa sida musharax ahaan | Vaikuttajan reittikartta
Doorashada waan codeeyaa/u ordaa sida musharax ahaan
Adigana doorashooyinka waad codeyn kartaa sidoo kale musharax ahaan ayaad u ordi kartaa. Finland waxaa ka jira afar nooc oo doorashooyin guud ah:
Doorashooyinka baarlamaanka, kasoo Xubnaha Baarlamaanka afartii sanadoodba mar la doorto
Doorashooyinka madax-weynaha, kasoo Madaxweynaha Jamhuuriyada la doorto lixdii sanandoodba mar
Doorashooyinka Dawladda Hoose, kaasoo guddiyada dawladda hoose la doorto afartii sanadoodba mar
Doorashooyinka Baarlamaanka Yurub, kaasoo Xubnaha Baarlamaanka Yurub la doorto shantii sanadoodba mar
Codeynta waa hab sahlan oo raad ku yeelata nolosha adiga kugu hareereysan. Ayada oo loo marayo doorashada, muwaadiniinta waxay awoodaan in ay codkooda ka dhiibtaan aaraadooda ku aadan go’aan ka gaarid sharciyada iyo in ay doortaan kuwa go’aanka gaara haddii ay lagama maarmaan tahay. Codeynta doorashada waa mid qarsoodi ah, taasoo ay micnaheedu tahay in qof kale uusan ogaaneyn cida aad u codeyneyso adiga oo usheega maahane.
Dhammaan mowaadiniinta Finnishka ee 18 jir ama ka weyn way ka codeyn karaan doorashooyinka Baarlamaanka Yurub iyo doorashooyinka Madax-weynaha. Muwaadin kasta oo xubin ka ah wadan EU Finland ku nool sidoo kale wuu ka codeyn karaa doorashooyinka Baarlamaanka Yurub.
Kuwa awooda in ay doorashada dowlada-hoose ka codeeyaan waxaa ka mid ah:
muwaadiniinta Finland, xubin kasta ee wadamada EU ga, Iceland ama Norway kuwasoo da’dooa tahay 18 jir ama ka weyn iyo kuwa degmadaaasi ku nool in kabadan 50 maalmood
muwaadin kasta oo ka soo jeeda wadan kasta oo 18 sano jir ah ama ka weyn oo degmadooda degan ugu yaraan 50 maalmood oo Finland ku noolaa ugu yaraan laba sanadood ee isku xigga
Sidoo kale adiga ayaa noqon kara musharax doorashada qeyb ka ah. Habka ugu caamsan ee doorashooyinka musharax ahaan looga qayb qaato waa in kaalin aad ka qaadataa mid ka mid ah xisbiyada. Habka kalena waa in ay urrurka codeynta ay kuu magacaabaan, kaasoo ah koox ka kooban tiro dad ah kuwasoo qofka u magacaaba sida musharax doorashooyinka ka qeyb qaadanaya.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan doorashooyinka, codeynta iyo musharaxnimada waxaad ka heleysaa www.vaalit.fi.